Imithi yooMongameli kaMongameli: Iimbalo zooMongameli baseMelika
Imbali kunye neNkcubeko Ukuzonwabisa & Iimpawu Zomndeni
Ngaba unxulumene nomongameli wase-US?
Sonke sasiva iintetho zentsapho yesihlobo esisekude ukuba ngumzala wesibini, esususwe nguMongameli "So-no-So." Kodwa ngaba kunjalo ngokwenene? Enyanisweni, akukho konke okungenakwenzeka. Abangaphezu kwezigidi ezingama-Amerika baseMerika, ukuba babuyela kude ngokwaneleyo, banokufumanisa ubungqina obubanxulumanisa nomntu omnye okanye ngaphezulu kwamadoda angama-43 abakhethiweyo bamongameli base-US. Ukuba unesizukulwana saseNtshonalanga yaseNtshonalanga unamava amaninzi okufumana uxhulumaniso lomongameli, olulandelwa ngabantu abaneQuaker kunye neengcambu zaseMzantsi.
Njengebhonasi, imiqolo ebhaliweyo yabameli abaninzi base-United States inikeza iziqhagamshelo kwizindlu ezinkulu zaseYurophu. Ngoko ke, ukuba unako ukudibanisa ngempumelelo enye yale miqolo, uya kuba nophando oluninzi oluqulunqwe (kunye nolungqinisisiweyo) olwakhiwa ngalo umthi wentsapho.
Ukubonakalisa inkokheli yentsapho okanye ibali loxhumano kumongameli wase-US okanye omnye umntu owaziwayo ufuna amanyathelo amabini: 1) uphando olwakho umgca kunye no-2) uphando ngomgca womntu odumiweyo kumbuzo. Emva koko kufuneka uqhathanise ezimbini kwaye ujonge uxhulumaniso.
Qalisa Ngomthi Wakho Wentsapho
Nangona usoloko uvile ukuba unxulumene nomongameli, usadinga ukuqala ngokuphanda ulwalamano lwakho. Njengoko uthatha umgca wakho kumqolo, uya kuthi-ke uthemba - qalisa ukubona indawo eziqhelekileyo kunye nabantu abavela kwimithi yentsapho kamongameli. Uphando lwakho luya kukunika ithuba lokufunda ngembali yentsapho yakho, ekugqibeleni, inomdla ngakumbi kunokuba uyakwazi ukuthetha ukuba unxulumene noMongameli.
Xa uphando malunga nomgca wakho, musa ukugxila kwigama lomntu owaziwayo. Nokuba unokwabelana negama lokugqibela nomongameli odumileyo, unxibelelwano lunokuthi lufunyenwe ngokubhekiselele kwicala elingalindelekanga lentsapho. Unxibelelwano oluninzi lwezomongameli luhlobo lohlobo lomde kwaye luya kufuna ukuba ulandele umndeni wakho kwiminyaka eyi-1700 okanye ngaphambili ngaphambi kokuba ufumane unxibelelwano.
Ukuba ulandelela umthi wakho usapho kumkhokho ovela kwelinye ilizwe kwaye ungayifumananga uxhumano, landela imigca ehla phantsi kwabo bantwana babo nabazukulu. Abantu abaninzi banokuthi baxhamle uMongameli uGeorge Washington, owayengenabantwana bakhe, ngomnye wabantakwabo.
Okunye: Indlela Yokuqala Ukulandelela Umthi Wentsapho Yakho
Iindaba ezilungileyo apha kukuba i-genealogies yomongameli iye yaphandwa kwaye iqulathwe kakuhle ngabantu abaninzi kwaye ulwazi lufumaneka lula kwimithombo eyahlukeneyo. Imithi yentsapho yomntu ngamnye wama-43 kaMongameli wase-US uye wapapashwa kwiincwadi eziliqela, kwaye iquka idatha ye-biographical, kwakunye neenkcukacha zobabini kunye nenzalo. KwiWebhsayithi ungaphengulula ngezizukulwana zengxelo yomnxeba kwi-intanethi yolwazi lwe-intanethi - jonga iiGenealogies ze-US Presidents.
Ukuba ulandele umgca wakho umgca kwaye ungabonakali ukwenza uxhumano lokugqibela kuMongameli, ngoko uzama ukukhangela i-intanethi kwabanye abaphandi ngomgca ofanayo. Unokufumana abanye baye bafumanisa imithombo ukuze bancede baqaphele ukuxhamla olufunayo. Ukuba uziva ukhonxwe kwiphepha emva kwekhasi lemiphumo yokucinga engenangqiqo, uzama oku kungeniswa kumasu okukhangela ukuze ufunde indlela yokwenza ukuba uphendule lukhule ngakumbi.
Okunye: Imithi Yentsapho yamaMongameli ase-US
Ezilandelayo > Ii-Biographies zoMongameli kunye nabaPhathi baQala
UGeorge Washington (1732-1799), uMarta Dandridge Custis (1732-1802)
UJohn Adams (1735-1826), uAbhigayil Smith (1744-1818)
Thomas Jefferson (1743-1826), uMartin Wayles Skelton (1748-1782)
UJames Madison (1751-1836), uDolley Payne Todd (1768-1849)
UJames Monroe (1758-1831), u-Elizabeth Kortright (1768-1830)
UJohn Quincy Adams (1767-1848), uLouise Catherine Johnson (1775-1852)
U-Andrew Jackson (1767-1845), uRachel Donelson Robards (1767-1828)
UMartin Van Buren (1782-1862), uHana Hoes (1738-1819)
UWilliam Henry Harrison (1773-1841), uAnna Tuthill Symmes (1775-1864)
UJohn Tyler (1790-1862), (1) U-Letitia Christian (1790-1842), (2) uJulia Gardiner (1820-1889)
UJames Knox Polk (1795-1849), uSara Childress (1803-1891)
UZachary Taylor (1784-1850), uMargaret "Peggy" uMackall Smith (1788-1852)
UMillard Fillmore (1800-1874), u-Abigail Amandla (1798-1853)
UFranklin Pierce (1804-1869), uJane Means Appleton (1806-1863)
UJames Buchanan (1791-1868) - akazange atshate
UAbraham Lincoln (1809-1865), uMary Anne Todd (1818-188)
U-Andrew Johnson (1808-1875), uEliza McCardle (1810-1876)
Ulysses Simpson Grant (1822-1885), uJulia Dent (1826-1902)
URutherford Birchard Hayes (1822-1893), uLucy Ware Webb (1831-1889)
UJames Abram Garfield (1831-1881), uLucretia Rudolph (1832-1918)
UChester Alan Arthur (1829-1886), uEllen Lewis Herndon (1837-1880)
UGrover Cleveland (1837-1908), uFrances Folsom (ngo-1864-1947)
UBenjamin Harrison (1833-1901), uCaroline Lavinia Scott (1832-1892)
UWilliam Mckinley (1843-1901), u-Ida Saxton (1847-1907)
UTheodore Roosevelt (1858-1919), uEdith Kermit Carow (1861-1948)
UWilliam Howard Taft (1857-1930), uHelen Herron (1861-1943)
UWoldrow Wilson (1856-1924), (1) uEllen Louise Axson (1860-1914), (2) uElbert Bolling Galt (1872-1961)
UWarren Gamaliel Harding (1865-1923), uFlorence Mabel uKling DeWolfe (1860-1924)
UCalvin Coolidge (1872-1933), uGrace Anna Goodhue (1879-1957)
UHerbert Clark Hoover (1874-1964), uLou Henry (1875-1944)
UFranklin Delano Roosevelt (1882-1945), u- Anna Eleanor Roosevelt (1884-1962)
UHarry S. Truman (1884-1972), u-Elizabeth Virgina "Bess" Wallace (1885-1982)
UDwight David Eisenhower (1890-1969), uMamie Geneva Doud (1896-1979)
UJohn Fitzgerald Kennedy (1917-1963), uJacqueline Lee Bouvier (1929-1994)
ULyndon Baines Johnson (1908-1973), uClaudia Alta Taylor "Lady Bird" (1912-2007)
URichard Milhous Nixon (1913-1994), uThelma Catherine "Pat" Ryan (1912-1993)
UGerald Rudolph Ford (1913-), u-Elizabeth Ann "Betty" i-Bloomer Warren (1918-)
UJames Earl (Jimmy) uCarter (1924-), uRosalynn Smith (1927-)
URonald Wilson Reagan (1911-2004), [link ur = http: //www.firstladies.org/biographies/firstladies.aspx? Biography = 41] Anne Frances "uNancy" uRobbins Davis (1923-)
UGeorge Herbert Walker Bush (1924-), uBarbara Pierce (1925-)
UWilliam Jefferson uBlythe Clinton (1946-), uHillary Rodham (1947-)
UGeorge Walker Bush (1946-), uLaura Welch (1946-)
UBarack Hussein Obama (1961-), uMichelle Robinson (1964-)
UMongameli Wentsapho Yomnatha Online
Uhlobo loNtsapho lwaseKennedy: Iintsapho kunye nabadala
Ukuzingela abaTyhi kwiNtsapho
Uhlobo lweNtsapho kaKumkanikazi uCleopatra
Ukholo luka-Albert Einstein
Ukuphanda ama-Ancestors aBantu abaPhezulu (okanye abaNtsapho)
Izindlela ezi-5 kwiTyrthi & Bonisa Umthi Wentsapho Yakho
Iimvumi ezili-10 zeGarage zeyona nto ephezulu kunazo zonke
Ukuba umntwana uyakhala ... Musa ukuvula uMnyango! - Iimbali zaseMzaneni
Amazwi adibeneyo adibeneyo: Iintlungu, intlungu kunye neentlungu
Jules Verne: Ubomi bakhe kunye neziBhali
2 Izenzo zokudibanisa amaSpanishi kunye nendlela yokusebenzisa ngokuchanekileyo
IKart Quartet 101